Sawirro: Wasiir kuxigeenka A. Dibadda oo cabasho u gudbiyay Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka | Puntlandes.com
Sawirro: Wasiir kuxigeenka A. Dibadda oo cabasho u gudbiyay Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka
06 Aug 2018 (Puntlandes) Xubno ka tirsan Guddiga Arrimaha Dibadda Golaha shacabka oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Guddiga Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali ayaa shalay kulan xog wareysi la yeeshay Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda Mukhtaar Mahad Daa’uud, kaddib isku daygii fashilmay oo Ciidamo ka tirsan Booliska oo maalintii Sabtidii ku doonayeen inay ku xiraan Wasiir kuxigeenka.
Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda Mukhtaar Mahad Daa’uud ayaa cabasho u gudbiyay Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka, isagoo u sheegay in ciidan hubeysan ay ugu yimaadeen xafiiskiisa, iskuna dayeen inay si xoog ah ku wadaa kuna xiraan, iyadoo ay u dheereyd handadaad.
Xubnaha Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka iyo Wasiir kuxigeenka oo dhowr saacadood shirkooda qaatay ayaa waxaa kaddib xubnaha Guddiga ay kulan u aadeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal, iyagoo ku wargeliyay in arrintan tahay dhaqan ku xun dowladnimada iyo sumcada qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay tilmaameen in aan la diidaneyn in sharciga sareeyo, qof walbana ay u siman tahay sharciga hortiisa.
Xubnaha Guddiga ee hoggaaminayay Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka C/qaadir Cosoble ayaa u sheegay Guddoomiye Mursan in loo baahan yahay in ixtiraamka iyo xasaanada mansabka uu leeyahay in la dhowro. Dowladnimadana ay taasi ku jirto.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa ka codsaday Guddiga inuu arrintan wax ka weydiin doono Xeer Ilaaliyaha iyo Madaxda sare ee dalka, isla markaana uu dib ugu soo warcelin doono Guddiga.
Muranka ka dhashay isku daygii xarigga iyo eedeyntii ka soo baxday Xeer Ilaalinta iyo Hanti dhowrka Guud ayaa waxay xiisad ka dhex abuurtay hey’adaha dowladda dhexdeeda, iyadoo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay si kulul u cambaareysay tallaabadii Ciidamo ka tirsan Booliska ku galeen xarunta Wasaaradda, isla markaana aheyd mid xadgudub ku hanaanka dowladeed, maamuuska iyo xurmada Wasaaradda.